Umshini we-China PUR hot melt adhesive laminating machine TH-101B Ukwakha kanye nefektri | I-Kangpa
I-PUR incibilika umshini wokunamathisela oshisayo we-TH-101B
1. Uhlelo lokuqondanisa onqenqemeni oluzenzakalelayo, ukuqondanisa okuzenzakalelayo, ukunciphisa ukusebenza.
2.Idivayisi yokuqaqa engenawo umoya, akukho mibimbi, ukunciphisa amandla emisebenzi.
3. Kuze kufike ku-80 m / min, ukukhiqizwa kwejubane eliphezulu, akukho ukomiswa.
Imodeli yomshini: X-TH101B
Ubukhulu bomshini: ubude * ububanzi * ukuphakama / 4080mm * 3000mm * 2200mm
Ububanzi impahla machinable: 1800mm
Ukukhiqiza: 0 ~ 40m / min
Amandla: 380V / AC
Ukushisa indlela: Ukushisa kagesi
Izesekeli ezifanayo: umshini we-sol we-200L
Indlela yokunamathisela: ukudluliswa kwephuzu leglue le-roller roller
I-Power drive: Imvamisa eguquguqukayo ye-AC engenajubane
Uhlelo lokulawula: isikhombimsebenzisi se-PLC
Isisindo somshini: 5800kg
Umbala womshini: omhlophe-omhlophe, obomvu waseChina
U-opharetha: 2 ~ 8
Izingubo zangaphansi, izingubo ezifudumele nezinye izinto eziguqukayo.
4. Ukulawulwa kwemishini yomshini we-PUR hot melt umshini wokusebenzisa umshini we-PLC nokulawulwa kwesikhombimsebenzisi somuntu, ukusebenza komuntu kanye nokugcinwa okulula.
5. Ngesistimu yokusakazwa kokushisa kokushisa kwamafutha, kulula ukulawula ukukhuphuka kwamazinga okushisa nokuwa nokuzinza kweglue.
6. Izinto zokunamathisela kanye nemikhiqizo eqediwe ingamukela izindlela zokufaka isikhungo noma izindlela zokukhetha indawo njengoba kudingeka.
7. Indlela yokunamathisela ihlukaniswe ngezindlela ezimbili: ukuhambisa nokugcoba okugcwele.
Izindlela zokuphepha ze-PUR ezincibilikayo zokunamathisela okushisayo:
Ama-opharetha angasebenzisa le mishini kuphela ngemuva kokuba ejwayelene ngokuphelele nokusebenza komshini kanye nemigomo yokusebenza. Le mishini kufanele isetshenziswe ngumuntu ozinikele, futhi abasebenzi abangasebenzi abakwazi ukuvula noma ukuhamba ngokungahleliwe.
Ngaphambi kokukhiqizwa, hlola ukuthi izinto zikagesi ezifana nezintambo, ama-breaker wesekethe, ama-contactor, nama-motors ziyahlangabezana yini nezidingo.
Ngaphambi kokukhiqizwa, hlola ukuthi ngabe amandla kagesi ezigaba ezintathu alinganisiwe yini. Akuvunyelwe nakancane ukuqala okokusebenza ngaphandle kwesigaba.
Ngesikhathi sokukhiqiza, hlola ukuthi ngabe ukuhlanganiswa ngakunye kwe-rotary kuphephile yini, noma ngabe ipayipi livinjiwe, ukuthi kukhona yini ukulimala, noma ukuvuza kukawoyela, bese ulisusa ngesikhathi.
Umshini kawoyela oshisayo kufanele uvulwe ngaphambi kokukhiqizwa, futhi umkhiqizo ungenziwa kuphela ngemuva kokuthi izinga lokushisa lenyukele ezingeni lokushisa elifunwa yile nqubo. Ngaphambi kokukhiqizwa, hlola ukuthi ingcindezi ye-barometer ngayinye ijwayelekile yini, noma ngabe kukhona yini ukuvuza endleleni yegesi, bese uyilungisa ngesikhathi.
Ngaphambi kokukhiqizwa, hlola ukuqiniswa kokuxhumeka ngakunye ukuze ubone ukuthi kukhona yini ukukhululeka noma ukuwa, bese ukukulungisa ngesikhathi.
Ngaphambi kokukhiqizwa kwezinto eziningi, inani elincane lokuhlola kufanele lenziwe kuqala, futhi ukukhiqizwa ngobuningi kungenziwa kuphela ngemuva kokuphumelela.
Ngaphambi kokukhiqizwa, hlola izimo zokuthambisa zeziteshi ezahlukahlukene zamanzi, izinciphisi, izihlahla ezithwele, izikulufu zomthofu, njll., Bese ugcwalisa uwoyela wokubacindezela kanye namafutha okugcoba ngendlela efanele nangesikhathi esifanele.
Ngemuva kokumiswa komshini, kufanele kuhlanzwe ithangi leglue, izesekeli ze-squeegee, kanye ne-anilox roller ngesikhathi ukuze kususwe iglue nensalela kuzo zonke izingxenye zomshini ukuze zisetshenziswe ngokulandelayo.
Akuvunyelwe nhlobo ukuxhumana noketshezi olonakalisayo nama-roller enjoloba, futhi uhlale uqinisekisa ukuthi ubuso be-roller drive ngayinye buhlanzekile futhi abunazindaba zangaphandle.
Akuvunyelwe neze ukunqwabelanisa imfucumfucu ezungeze umshini kawoyela oshisayo, futhi ugcine umshini kawoyela oshisayo nezindawo ezizungezile zihlanzekile futhi zingenazo izinto zangaphandle ngaso sonke isikhathi. Lapho umshini kawoyela oshisayo usebenza, akuvunyelwe nakancane ukuthinta ipayipi likawoyela lokulethwa ngesandla.
Langaphambilini Magnetic powder ukubopha
Olandelayo: Blister Ukupakisha umfutholuketshezi Cindezela
Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine
Izisetshenziswa Zokuhambisa Ezishisayo
Umshini Oshisayo we-Hot Melt Film
Hot Melt Foam wokulaminetha Machine
I-Hot Melt Glue Isicelo
Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo
Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Kwe-Textile
Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe
Umfakisicelo we-Hot Melt Glue Roller
Umshini Wokuncibilikisa Okushisayo
I-Hot Melt Lamination
Inqubo Yokuncibilikisa Okushisayo
Umshini Wokushisa Oshisayo Oshisayo
Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating
Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven
Umshini Oshisayo Wokuncibilikisa Okushisayo Wengubo
Imishini Yokushisa Yokuncibilikisa Okushisayo
Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, I-Hot Melt Glue Isicelo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating,